Waxaad horay u kaydin kartaa ilaa $ 150 $ gal Galaxy S10 - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »Waxaad horay u kaydin kartaa ilaa $ 150 $ brand new Galaxy S10 - BGR
Waxaad horay u kaydin kartaa ilaa $ 150 $ gal Galaxy S10 - BGR
Xusuusnow hal bil ka hor marka aan kuu sheegay waxaa laga yaabaa in kuwa caqliga leh inay dib u dhigto iibsan S10 Galaxy sababtoo ah heshiisyo wanaagsan la fili karo ka dib. Waa hagaag, haddii aad weli aan jiido keebka, ogaadana in Samsung hore u bixisaa dhowr ah lagu daydo ugu yaraan USD 100, inkastoo kaydka gaadho 150 USD.
Heshiiska ayaa la heli karaa si toos ah uga soo jeeda Samsung oo aad u baahan tahay inaad telefoonka ku hesho qorshaha lacag bixiyaha ee AT & T, Sprint, T-Mobile, US Cellular ama Verizon. Heshiiskaasi uma baahna qalab isbeddel ah, kaydaduna waxay khuseysaa heerarka kala duwan ee kaydinta, markaa waxaad dooran kartaa nooca kugu habboon.
Waxaad heli doontaa hoos u of $ 100 on Galaxy S10e ee 128 GB iyo 256 GB, kaydka ah $ 100 on S10 Galaxy ama Galaxy S10 More 128 GB ama USD 150 on versions of kaydinta 512 GB iyo 1 si ay (haddii ay khuseyso). Intaa waxaa dheer, Samsung waxay bixisaa a xeedho wireless lacag la'aan ah iyadoo dad badan oo ka mid ah lagu daydo, oo dambe idinma badbaadin doono on aad iibsatay xiga ee Galaxy S10.
Haddii aad rabto in aad ku iibsato casriga ah, casriga ah ee hawlaha, waxaad heli doontaa lacag caddaan ah ilaa 300 USD, horumar ah in Samsung mar hore loo isticmaalo.
Haddii Samsung ayaa diyaar u ah in la yareeyo qiimaha Galaxy S10 of 100 in USD 150 bishii kowaad ee iib aheyn ka dib, taas macnaheedu waa in aad 'Waxaad kartaa is Galaxy S10 loo isticmaalo xitaa ka jaban, waxa warbixinta bishii la soo dhaafay si dadban . The dheer aad sugto, ayaa in ka badan waxaad ka heli doontaa qiimaha fiican, xitaa haddii aan aydnaan shakiyin in Samsung doono yareynta wax yar ka badan oo muhiim ah oo ku saabsan S10 Galaxy. Eeg kala duwan ee ka buuxa Galaxy S10 on link this .
Weligeed ma fududa in la kariyo suxuunta delicious iyo miisaanka leh marka la barbar dhigo fryer hawada - BGR